Global Voices teny Malagasy » ‘Women Make the News’: Lahatahiry An-Tserasera Mampifandray ny Mpanao Gazety Amin’Ireo Vehivavy Thailandey Manampahaizana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Marsa 2018 10:58 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Thailandy, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta
Tranonkala ‘Women Make the News’
Taitra sy feno ahiahy amin'ny fahavitsian'ny vehivavy manampahaizana anaovan'ny fampitam-baovao be mpanaraka antsafa, Namoaka tranonkala  iray ny UNESCO ao Bangkok hampifandray ny mpanao gazety sy mpikaroka Thailandey amin'ireo vehivavy mpampianatra ambony, na manampahefana ambony, mpikambana amin'ny governemanta, mpitarika orinasa na vondron'orinasa ary mpikatroky ny FTMF (ONG).
Navoaka  tamin'ny taona 2017 ny fitoeran-dahatahirin'ny “Women Make the News” [Vehivavy Manao Vaovao – Vehivavy Hita amin'ny Vaovao] hampandrosoana ny fitovian'ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fampitam-baovao sy ny fiarahamonina. Atolony ao ny lisitry ny laharana sy ny adiresin'ny vehivavy manampahaizana manokana amin'ny taranja iray na maromaro mba hanasongadinana feom-behivavy betsaka kokoa rehefa misy ny fanaovana tati-baovao.
Notononin'ny UNESCO Bangkok ny fanadihadiana  iray nataon'ny Thai Public Broadcasting Service [Tolo-Panjakana Fampielezam-Peo sy Sary Thailandey] tamin'ny taona 2014 izay nahita fa iray amin'ny manampahaizana anaovan'ny vaovaon'ny Fahitalavitra thailandey miisa efatra ihany ao anatin'ny iray volana no vehivavy.
Nefa tsy hoe tsy ampy ny isan'ny vehivavy manampahaizana any Thailandy. Fanadihadiana iray hafa no namoaka fa tokony ho 53 isanjaton'ny manampahaizana rehetra ao amin'ny firenena no vehivavy. Ankoatra izany, vehivavy ny 37 isanjaton'ireo lohalaharana amin'ny fihariana. Thailandy ihany koa ny iray amin'ny firenena enina eto ambonin'ny tany izay maro mitovitovy isa amin'ny lehilahy ny vehivavy manomboka fihariana [fandraharahana].
“Ao Thailandy, tokony ho 53% amin'ny manampahaizana rehetra no vehivavy. Vehivavy no mandrafitra ny 37%-n'ireo manana anjara toerana ambony amin'ny fihariana. Thailandy koa no 1 amin'ny firenena 6 ka mitovy isa ny lahy sy ny vavy amin'ny fanombohana fihariana. Na izany aza dia 24% monja amin'ny manampahaizana no vehivavy anaovan'ny fampitam-baovao antsafa.” Loharanom-baovao: UNESCO Bangkok
Ho setrin'ny fahabetsahan'ny fanehoana ny vehivavy ho lasibatra, isam-pianakaviana (fotsiny) sy fitaovam-pahafinaretan'olon-dehibe no namovolavolana ny tetikasa “Women Make the News”. Manana tanjona manokana miisa telo izy:
Mampifandray ireo mpanao gazety monina ao Thailandy amin'ny feon'ny vehivavy manampahaizana.
Mampitombo ny fahitana ireo vehivavy manampahaizana sy ny feon'ny vehivavy ao amin'ny vaovao ampitaina.
Manasongadina ny fahamaroana sy ny karazam-pahaizana ananan'ny vehivavy ao Thailandy sy mandrisika ny fandraisana anjaran'ny vehivavy amin'ny fiaraha-monina.
Amin'ny fotoana anoratana (ny teny anglisy), efa ho 300 ny vehivavy manampahaizana amin'ireo lohahevitra isan-karazany matetika nahitana fitongilanana ny isan'ny lahy sy ny vavy amin'ny tati-baovao. Ao anatin'izany lohahevitra izany ny media, ny teknolojia vaovao sy ny fanavaozana, kolontsaina sy tantaran'ny Fikambanan'ny firenena Aziatika Atsimo-atsinanana, ary ny tontolo iainana sy ny fikorontanan'ny toetrandro. Nampirisihana ny daholobe hanonona manampahaizana bebe kokoa sady manasa vehivavy mpitarika hafa ho ao anatin'ny fitoeran-dahatahiry.
Pikantsarin'ny tranonkala ‘Women Make the News’
Mora ihany ny fampiasana ny fitoeran-dahatahiry. Ny fitaovana itadiavana no ahafahan'ny mpisera mahita ireo manampahaizana araka ny fahaizana, toerana, sokajiin'asa ary ny lohahevitra karohina.
Raha nitady manampahaizana manokana ao amin'ny “internet”  ao Bangkok ny mpanoratra, nalahatry ny fitoeran-dahatahiry ireo manampahaizana maro izay ao anatin'ny sekoly tsy miankina toy ny Oniversite Thammasat sy ny Oniversite Chulalongkorn, ary toy izany ihany koa ny minisitra lefitra misahana ny fanabeazana.
Ahitana torohay sy ny fintin-dalam-piainan'ilay manampahaizana ny sarintava tsirairay avy. Ohatra, ity ny sarintava sy ny mombamomba ilay mpitariky ny zon'olombelona Angkhana Neelapaichit:
Herintaona taorian'ny famoahana azy, neken'ny UNESCO Bangkok ny fetran'ny fiantraikan'ny fampiasana ilay fitaovana:
Ny fitsapan-kevitra nataon'ny UNESCO hamantarana ny fetra tratran'ny fitoeran-dahatahiry no nahitana fa raha nisy nifandray taminy ny atsasaky ny vehivavy voasoratra ao amin'ny fitoeran-dahatahiry mba hanaovana antsafa, dia tsy nahalala ny fisian'ny fitoeran-dahatahiry ny ankamaroan'ny mpanao gazety.
Ho fanafan'izany toe-javatra izany, nisy ny atrikasa nomanina niaraka tamin'ny vondrona fampitam-baovao thailandey maro tamin'ny fotoana fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tamin'ny fiandohan'ny volana marsa 2018.
Fantaro bebe kokoa ny fomba fampiasana ny fitoeran-dahatahiry ao Thailandy amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fijerena ity lahatsary  fohy ity:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/31/117000/